Chihuahua Terrier Sanganisa - Izvo Zvakafanana Kuti Uve Neayo Imwe - Inobereka
Chihuahua Terrier Sanganisa - Izvo Zvinoita Kuva Wako
Kufanana sezita rinoratidzira, iyo Chihuahua Terrier musanganiswa ndizvozvo chete.
Iyi poisty, yakajeka uye ine simba pooch mhedzisiro ye Kubatana neChihuahua nechero ipi yemhando dzeTerrier. Mienzaniso yakajairika inosanganisira:
Rat Terrier Chihuahua Sanganisa
Jack Russell Terrier Chihuahua Sanganisa
Fox Terrier Chihuahua Sanganisa
Yorkshire Terrier Chihuahua Sanganisa
Kufadzwa kuziva zvinoitika kana isu tasanganisa bossy asi tichida Chihuahua neisina simba uye akangwara terrier marudzi? Verenga pamusoro kuti uone kana iri diki, asi, imbwa sassy inogona kuve yako.
Chihuahua Terrier Sanganisa Info Tafura
Saizi 10 kusvika 28 ″
Kurema 6 kusvika 25 lbs
Hupenyu Makore gumi nemaviri - makumi maviri
Inokodzera For Dzimba dzevakuru chete
Ruvara Kusiyana Ichena, nhema, tema, shava, bi uye katatu ruvara nekuda kwehuremu hwenzvimbo dzinobereka
Kudzikama Simba, kusaneta, kushingaira, kusindimara, kutya uye kupenya
Chihuahua Terrier Mix - Kubereka Kuongorora
Chihuahua Terrier Sanganisa Hunhu
Nzira Yekutarisira Yeyakavhenganiswa Yekubereka Terrier
Kudyisa Chihuahua Sanganisa Imbwa - Kudya Zvinodiwa
Kudzidzira Imbwa Diki
Kudzidzisa Terrier Chihuahua Mix
Chihuahua Terrier Mix Kuonekwa
Izvo chete zvarinotaura pane tini, iyo Chihuahua Terrier musanganiswa inogona kunge iri imbwa yakasarudzika.
Iyi sassy pooch ndeye mhedzisiro yekuuchikwa kweChihuahua neimwe yeakawanda materu. Sezvaungangodaro iwe uchiziva, kune akati wandei marudzi emhando dzakanyoreswa neAmerican Kennel Club. Ivo vanodiwa nekuda kwekusimba kwavo uye kusatya.
Iwo akajairwa maTerriers anoshandiswa kugadzira irudzi urwu ndeaya:
Yorkshire Terrier ( inozivikanwawo seChorkie )
Rat Terriers vanoremekedzwa nehungwaru hwavo - kwete rudzi rwekare, ivo vakatanga kuoneka muAmerica makore ekuma 1920's-1930s. Yakakura pakukura kupfuura mamwe maTerriers, kana Chihuahua yayambuka neiyi Terrier, ivo vanowanzo kuve pahukuru hukuru hwechiyero (kureva padyo nemakumi maviri emapaunzi).
Iyo Jack Russell Terrier inonamatwa nekuda kwekusimba kwayo. Ivo havana kutya, vanomhanya uye vanobudirira mudzimba dzinoshinga uye vanonyanya kusarudzika kukurumidza kana mitambo yebhora.
Fox Terriers inogona kuve yakapfava, kana waya yakaputirwa; zvakafanana muhunhu, iwo chete maitiro avo akasiyana. Ichitsanangurwa sekuzvimiririra, iyi ingori nzira yakanaka yekutaura kuti ivo dzimwe nguva vanokushungurudza. Simba guru, ava varume vanodawo imba inoshanda.
Isu tinoziva kuti maTerriers mazhinji ane maitiro akafanana; kushingaira, kusvinura, kuchenjera uye kuzvimirira. Chii chinoitika zvino kana tikasanganisa imwe yeaya maTerriers neChihuahua?
Chihuahua inofadza uye inoyevedza; ichibva kuMexico, vakave imbwa inozivikanwa yechikwama kuvapfumi uye vane mukurumbira kushandiswa kwavo mumarudzi akasanganiswa . Ivo vanodiwa nekuda kwehukuru hwavo hudiki; inokodzera dzimba diki uye kugara kweguta. Chis akasvinura, ane hupenyu uye anotya, dzimwe nguva akaomesa musoro uye akazvimirira sevamwe maTerriers zvakare
Zvatinopedzisa nazvo ipapo zvakapetwa nedambudziko - huchenjeri nesimba kubva kune yekuvhuvhuta uye nehusimbe hutongi kubva kuna Chi.
Sezvo uyu musanganiswa iri imbwa yakasanganiswa, haisati yazivikanwa neAmerican Kennel Club, zvakadaro mimwe misanganiswa, seChihuahua kuyambuka Yorkshire Terrier inozivikanwa neInternational Designer Canine Registry.
Kune Chihuahua Terrier Sanganisa Puppy, mutengo uri pakati pe $ 400 - $ 800 USD.
Mutengo wepamusoro mutengo unowanzo kuve unosanganisirwa naamai vari Chihuahua sezvavanogona vanotambura zvakanyanya matambudziko ehutano panguva yekusununguka . MaLitters anowanzo kuve madiki saka iwe vazhinji vanowana vanozivikanwa vafudzi vanoshandisa rondedzero yekumirira.
Kunyangwe paine huwandu hwesimbi inowanzo sanganiswa kuti ibudise iyi yambiro uye nehungwaru, hunhu hwavo hunowanzo fanika. Sezvo isu tichiziva, hatife takakwanisa kuve zana muzana pamhedzisiro yehybrid - vanogona kunge vari Chihuahua kupfuura Terrier kana zvinopesana.
Kazhinji, uyu musanganiswa isimba rakakwira uye imbwa yemitambo. Ivo vanowanzo kuve vakangwara uye vakasvinura, asi kana vakachengeta kusindimara kubva kuChihuahua, vanogona kuve kwakaoma kudzidzisa - kupaza dzimba kunyanya zvakadaro.
Iyo Chihuahua Terrier Mix masutu anoshanda, vakuru chete dzimba. Nekuda kwehukuru hwavo hudiki, havashiviriri kutamba kwakaomarara kubva kuvana vadiki, uye neTerrier mageneti ekuvhima, vanogona kupota .
Ivo vanokodzera varidzi vane nguva uye moyo murefu wekugadzirisa nekukurumidza uye nekuenderera mberi kwekudyidzana uye kudzidziswa kuti vaone kuti havasi kukura ' imbwa diki chirwere ”!
Kazhinji kazhinji, diki diki chirwere haina kunyanya kubereka yakatarwa, ingori vamwe varidzi vanofunga kuti havafanirwe kudzidzisa imbwa diki zvakanyanya sekuita kwavo imbwa hombe.
Kana imbwa diki iri kuhukura pane chimwe chinhu uye yotya; unogona kusarudza kunhonga imbwa kuti ubvise kubva pamamiriro ezvinhu. Iwe haugone kuita izvi nembwa hombe, iwe unofanirwa kutsausa uye kukurudzira maitiro akasiyana kana vaviri nemubairo.
Imbwa diki inodzidza kusvetukira kumuridzi kuti itorwe nenzira yekutya, nepo imbwa hombe inodzidza kudzoka inova nzira iri nani yekutarisana nayo.
Iyo Terrier Chihuahua Sanganisa, kana inoshamwaridzika mushe inogona kutsungirira dzimwe imbwa, asi, haina kushamwaridzana kupfuura vazhinji - ivo vanofarira kusarudza kambani yevanhu.
Chihuahuas dzinowanzo rondedzerwa sembwa dzemhuri - uko kwavanogona kuve vanokwanisa kutsungirira imwe imbwa yerudzi rwakafanana kana saizi yakafanana.
Nekuda kwenzvimbo dzekuvhima dzeTerrier, kushamwaridzana zvakanaka kunodiwa kana iwe uchitarisira kuti vagare nedzimwe imbwa kana mhuka dzinovarairwa dzemhuri.
Ngatione kuti zuva ripi muhupenyu hwekuchengeta imbwa iyi rinotaridzika.
Sezvatakambotaura, iyi imbwa inokodzera zvakanyanya kune vanoshingaira, vakuru dzimba chete. Vanoda varidzi vevarwere vanonzwisisa zvavanoda.
Kuve vari vadiki muhukuru, kudya kwavo kwezuva nezuva kwekoriori kwakaderera zvakare. Izvi zvinoita kudyisa uyu musanganiswa zviri nyore kwazvo .
Pakati nepakati ivo vachadya vakatenderedza makumi mana emacalorie paundi yehuremu hwemuviri pazuva. Kurwira kwaChihuahua kunyanya nechando, saka kana imbwa yako yakachengeta yakawanda yemubereki wavo wechiChihuahua unogona kuona kuti vanoshandisa macalorie akawanda kutonhora kwemamiriro ekunze, kuyedza kudziya.
Yakajairika saizi yekusanganisa ichave yakatenderedza gumi nemashanu mapaundi muhuremu hwemuviri inozoisa yavo yakajairwa yekudya kwezuva nezuva pamazana mazana matanhatu emakori
Chikafu chemhando yepamusoro chinofanirwa kuzadzisa zvido zvavo zvezuva nezuva zvekudya zvinosanganisira mapuroteni akakora nemafuta.
Mapuroteni akakosha mukusimudzira kwembwanana yako, tsvaga kibble feed, kana chikafu chisina kugadzirwa , ine huwandu hwakawanda hwepuroteni fomula. Yako isina kuneta Terrier ichashandisa izvo.
Zviduku zvidiki zvinowanzo wedzera huremu nyore - sezvo zvichidyiswa tafura yezvimedu. Tarisa imbwa dzako kudya kwezuva nezuva kana iwe uchinge uchimbonetseka nezvehuremu hwake.
Kuve uchiomesesa kudzidzisa (nekuda kwekusindimara kwavo kweChihuahua), unogona kuyedzwa kuti ushandise mabatirwo akawanda kukurudzira hunhu hwaunoda - funga kushandisa yakaderera macalorie anobata panzvimbo.
Iwe unofanirwa kukwanisa kuona chiuno chake uye mbabvu dzake dzinogona kubatika. Kubva kushiri ziso rinotarisa iye anofanirwa kuve neawa girazi chimiro kune muviri wake.
Kwete chete kuti chikafu chinodyiwa chinokanganisa huremu, ndizvo zvinoita imbwa yako chiitiko.
Maminitsi Vanopfuura makumi matanhatu
Kuchengeta maTerrier geni, iyo Chihuahua Terrier musanganiswa inowanzo kuve nesimba uye kuneta-chiratidzo.
Iyi imbwa inoda maminetsi makumi matanhatu ekurovedza muviri pazuva.
Kana iwe waifunga kuti iyi pooch diki inogona kunge iri pasofa mbatatisi, haugone kuve uchibva pachokwadi. Kana iwe uchitsvaga pasofa mbatata edza hama yake .
Vanoda kuve vakabatikana uye, kunyangwe nehukuru hwavo hushoma, vanogona kutsungirira kufamba kwenguva refu zviri nyore uye zvakachengeteka. Zvakanakisa kufamba navo pa leash hazvo - iyo Terrier iri mavari inogona kusarudza kudzingirira.
Kunyangwe nehungwaru hwavo, iko kudzingirira kunonyanya kunakidza kupfuura iwe (kazhinji)!
Hwavo husingashamwaridzane-kupfuura-hwakawanda-imbwa hunhu zvinogona kureva kuti mapaki embwa akaoma kufamba, anogona kunge achihukura kune dzimwe imbwa, kana kutotadza. Nzira yakanakisa yekugadzirisa izvi ndeye kushamwaridzana navo kubva vachiri vadiki uye vabatsire kuita musangano wekuti dzimwe imbwa dzinogona kunakidza kuvepo.
Kwete chete kuti muviri wavo unofarira kuve unoshanda, ndizvo zvinoitawo pfungwa dzavo.
Sezvatataura, iyi imbwa diki yakangwara kwazvo.
Nyaya iripo ndeyekuti ivo vakachengeta kusindimara stak kubva kumubereki wavo wechiChihuahua - izvi zvinogona kuita kuti kurovedzwa kuome.
Kushivirira chinhu chikuru.
Imbwa dzese dzinopindura zvakanyanya kusimbisa kwakanaka uye mubairo-wakavakirwa kudzidziswa .
Tanga kushamwaridzana vadiki, uvazivise kune vanhu, mhuka, michina, zvishandiso - zvese zvavanozosangana nazvo pazuva chairo. Rangarira isu takataura kuti vamwe vanowanzo gadzira sei 'diki imbwa chirwere', rovedza yako diki pooch sezvaungaita hombe pooch. Chero hunhu hwaungatarisira kubva kumbwa hombe; kusvetuka mudenga, kupomba, kuhukura zvakanyanya kana kupaza; usabvuma kubva kune imbwa yako diki.
Kuputsa imba kunogona kunge kuri nyaya muChihuahua saka izvi zvinogona kuve dambudziko rinogona kunge riri kuMix yako futi, heano edu epamusoro matipi ekudzidzisa:
Chengeta mbwanana yako pachirongwa chekudya chenguva dzose uye umuregedze abude aende 'poto' mushure mekudya kwese
Mutorere chinhu chekutanga mangwanani uye chekupedzisira usati warara
Pinda muitiro wekumuburitsa nguva nenguva (ino inogona kunge iri maminetsi makumi matatu kana nguva yeawa imwe paanenge achikura)
Rumbidzo / mubairo kana mbwanana yaenda 'potty' kwete panguva, kungoerekana mafaro panguva ingangomukanganisa uye kumumisa pakati kuyerera
Tora puppy kunzvimbo imwechete. Achanhonga hwema hwake
Usarange chero tsaona mumba - unoda kuti aende muhari, panzvimbo chaipo. Ndiro basa rako kumuratidza pane nzvimbo chaiyo iri
Neutralize chero tsaona dziri mumba nemuchena vhiniga kuti ubvise hwema
Kune mamwe matambudziko akajairika ehutano anowanikwa mune iyi hybrid, kusanganisira:
Luxella Patella yakajairika mumhando diki. Apa ndipo panobvaruka kneecap yavo kubva panzvimbo yayo chaiyo.
Hydrocephalus, inozivikanwawo se mvura pauropi , yakajairika mune zvidiki zvidiki, zvidhoma. Izvi zvinokonzeresa kumanikidza mukati medehenya, zvichikonzera kukuvara kwehuropi uye zvinowanzo kuuraya.
Chirwere chemoyo - izvi zvinowanzo garwa nhaka uye zvinotadzisa kugona kwemoyo kupomba ropa kutenderedza muviri. Kune akati wandei ezviratidzo zvinosanganisira kuneta, kuneta, kukosora kana kufema kwekutambudzika.
Nekuda kweiyo renji yeTerriers inowanikwa mune iyi musanganiswa, maitiro avo anogona kusiyana zvakanyanya.
Ivo vanoonekwa mune akasiyana mavara kusanganisira:
Bi uye Tri mavara
Pamusoro pekusiyana kwemavara, anogona kuve akareba kana mapfupi akaputirwa, zvinoenderana nevabereki vavo veChihuahua neTerrier. Dzimwe dzakaputirwa, dzimwe dzakaputirwa newaya (semuenzaniso Rat Terrier Chihuahua Mix).
Tarisa kuvabereki kuti uwane zano riri nani rekuti musanganiswa wako unoita sei. Mubereki musoro wenondo here kana musoro weapuro Chihuahua? Yakareba kana ipfupi yakavharwa? Iyo Terrier ndeye Fox Terrier here? Izvo zvakatsetseka zvakaputirwa here kana waya yakavharwa? Mubereki weYorkshire Terrier anogona kupa dema Chihuahua Terrier Mix. Mubereki waJack Russell anogona kupa chena uye kusviba kuchena.
Izvo zvavanoda zvekushambidzika zvinoenderana nemhando yavo yejasi.
Kazhinji, majasi mazhinji zvinoda kukwesha 2-3 pasvondo . Taura nemugadziri anokwanisa kuti uwane kunzwisiswa kwejasi rako remusanganiswa uye nzira yekuzvigadzirisa.
Nekuda kwehukuru hwavo hudiki, unogona kuzviwana zviri nyore kuvagezesa pamba kuti vachengete bhachi ravo richinhuwirira kutapira. Nguo dzesvutugadzike dzinogona kunge dzine mafuta uye dzichiita sedzakasviba.
Pamwe chete nekukwesha nguva dzose, ivo vachada nzeve uye maziso avo kutariswa pamusoro uye vhiki nevhiki mazino kukwesha.
Iyo inotapira asi sassy Chihuahua Terrier musanganiswa - kwete munhu wese mukombe wetii, asi kune vakuru vanoshingairira vanofarira hushoma hunhu izvi zvinogona kukwikwidza.
Kutanga kushamwaridzana uye kudzidziswa kwakakosha mukuderedza mikana yekuti ave nehurwere hwediki chirwere.
Iye anoda muridzi anonzwisisa hunhu hwake uye ane moyo murefu wekudzidzisa kuburikidza nehukama hwake.
Mubairo-wakavakirwa kudzidziswa uye kusimbiswa kwakanaka kunokupa iwe wakanakisa kupfura pano uye semhedzisiro iwe unenge uine imbwa isingatyi uye inotyisa imbwa; akavimbika nomoyo wake wose.
Iyo Nyoro Giant: Ndiyo Great Dane Lab musanganiswa iwe?
200+ Imwe-ye-ye-Mhando Chihuahua Mazita Auchada
german shepherd lab mix weight
makomba emhuno eblue anokura zvakadii